Kuraas ka mid ah aqalka sare ee Soomaaliya oo doorashadoodu ka dhacayso Jowhar | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Kuraas ka mid ah aqalka sare ee Soomaaliya oo doorashadoodu ka dhacayso...
Kuraas ka mid ah aqalka sare ee Soomaaliya oo doorashadoodu ka dhacayso Jowhar
Maanta ayaa lagu wadaa in Xildhibaannada Baarmaanka maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Hir-Shabeelle ay doortaan Xubno kamid ah Xildhibaannada Hir-Shabeelle ku matala Aqalka Sare ee Soomaaliya.
Shalay 27 musharax oo ku tartamaya 8 kursi oo yaala deegaanada maamulka Hirshabeelle ayaa Baarlamaanka Hir-Shabeelle u jeediyay khudbadahooda musharaxnimo, iyagoo soo bandhigay waxyaabaha uu qof walba qaban doono hadii uu guuleysto.
Saddex kamid ah kuraasta Aqalka Sare ee Hir-Shabeelle ayaa doorashadoodu tahay mid xiiso gaar ah leh, waxaana difaacanaya Sanoterada kala ah, Muuse Suudi Yalaxoow, Dr Cusmaan Maxamuud Dufle iyo Naciimo Ibraahim, kuwaasoo ku fadhiyay kuraastaan Afartii sano ee la soo dhaafay.
27 Musharax ee ku tartami doona 8 kursi ee Maamulka Hir-Shabeelle ku matalaya Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa waxaa ay Magacyadooda kala yihiin.
Ammaanka Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeelada dhexe ayaa aad loo adkeeyay, waxaana doorashada goobjoog ka noqon doona Xubno ka socda Guddiyada doorashooyinka Heer Federaal iyo xalinta khilaafaadka ee Soomaaliya.
Previous articleWaaxda dambi baarista oo raadinaysa nin gabadh yar faraxumeeyay
Next articleGuddiga doorashada Soomaaliya oo warbixin u gudbiyay ra’iisul wasaaraha